21 Jul Published inSport Written by WKM
Be the first to comment!	အပြောင်းအရွှေ့အချိန်ကာလ ရှည်လျားမှုအပေါ် မန်စီးတီးနည်းပြ ဂွါဒီယိုလာ ဝေဖန်ပြောဆို
မန်စီးတီးနည်းပြဂွါဒီယိုလာသည် ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ အချိန်ကာလအားဖြင့် အချိန်ရှည်လျားသည့်အပြင် အကြီးမားဆုံး အပြောင်းအရွှေ့ကာလတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်သည်။ ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့် ဆောင်းရာသီက စားသမား အပြောင်းအရွှေ့အား ဇန်နဝါရီတစ်လတည်း သာသတ်မှတ်ခဲ့ သော်လည်း နွေရာသီကစားသမား အပြောင်းအရွှေ့ ဈေးကွက်ကိုမူ မေလကုန်မှသြဂုတ်လကုန်အထိ သတ်မှတ်ထားခြင်းကြောင့် သုံးလနီးပါးအချိန် ကာလတစ်ခုအတွက် နည်းပြဂွါဒီယိုလာက ယခုကဲ့သို့ဝေဖန်ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
Read more... 21 Jul Published inSport Written by WKM
Be the first to comment!	မန်စီးတီး တိုက်စစ်မှူး အီရန်နာချိုကို ခေါ်ယူရန် လက်စတာအသင်း နီးစပ်နေ
လက်စတာအသင်းသည် ရာသီသစ်ပြင်ဆင်မှုအဖြစ် အဓိကတိုက်စစ်မှူး ဂျေမီဗာဒီနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် မန်စီးတီးအသင်း၏ နိုင်ဂျီးရီးယားလက်ရွေးစင် လူငယ်တိုက်စစ်မှူး အီရန်နာချိုကို ခေါ်ယူရန် ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိရာတွင် သဘောတူညီမှုများရရှိခဲ့ပြီဖြစ် ကြောင်း သတင်းထွက်ပေါ်မှုများ ရှိလာခဲ့ပြီးနောက် အပြောင်းအရွှေ့ ဖြစ်ပေါ်ရန် နီးစပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Be the first to comment!	အာဆင်နယ် ဂိုးသမား ဆက်ဇနီ ဂျူဗင်တပ်အသင်းသို့ အပြီးသတ် ပြောင်းရွှေ့
အာဆင်နယ်အသင်း၏ ပိုလန်လက်ရွေးစင်ဂိုးသမားဖြစ်သူ ဆက်ဇနီသည် အီတလီစီးရီးအေချန်ပီယံ ဂျူဗင်တပ်အသင်း၏ ကမ်းလှမ်းမှုအား လက်ခံခဲ့ပြီးနောက် ယူရို ၁၂ ဒသမ ၂ သန်းဖြင့် အပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိ ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ဂျူဗင်တပ်အသင်း၏ အတည်ပြုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
Read more... 20 Jul Published inSport Written by WKM
Be the first to comment!	ပထမဆုံး ရည်မှန်းချက်က ပွဲတွေ ကစားနိုင်သမျှ အများဆုံး ကစားရဖို့ပါပဲ' ဘာကာယို
ချဲလ်ဆီးနောက်တန်း ကစားသမားသစ် ဘာကာယိုကိုနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဘောလုံးရာသီတွင် ထင်မှတ်မထားသည့် ခြေစွမ်းရလဒ်များနှင့်အတူ ဥရောပ ဘောလုံးစာမျက်နှာတွင် နေရာယူခဲ့သည့် ပြင်သစ်ကလပ် မိုနာကိုအသင်း၏ စွမ်းဆောင်မှုက အံ့အားသင့်ဖွယ် အနေအထားတွင် ရှိနေခဲ့သည်။ ထို့အတူ ကွင်းလယ်ခံစစ်တွင်သာမက ခံစစ်နေရာတွင်ပါ ခြေစွမ်းပြ ကစား နိုင်ခဲ့သည့် ပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကစားသမား ဘာကာယိုကိုကို အသင်းကြီးအချို့ စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ မန်စီးတီး၊ မန်ယူအသင်းများသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် နီးစပ်ခဲ့သော်လည်း ဒူးဒဏ်ရာ အနည်းငယ်ရှိနေသည့်အတွက် အပြောင်းအရွှေ့ ကြန့်ကြာမှုများ ရှိခဲ့သည့်တိုင် နောက်ဆုံးအချိန်တွင် ချဲလ်ဆီးအသင်းသို့ ပြောင်း ရွှေ့ရောက်ရှိခဲ့သည့် ဘာကာယိုကိုနှင့် ချဲလ်ဆီးအသင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အင်တာဗျူးအား ပြန်လည် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
Be the first to comment!	စပါး ဂိုးသမားဟောင်း ပေါလ်ရော်ဘင်ဆင် ကစားသမားဘဝမှ အနားယူခဲ့ပြီဖြစ်
စပါးအသင်းနှင့်အတူ အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့ပြီး တစ်ဦးချင်း စွမ်းဆောင်မှုကောင်းများရှိခဲ့သည့် အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင် ဂိုးသမားဟောင်းဖြစ်သူ ပေါလ်ရော်ဘင်ဆင်သည် ကစားသမားဘဝတွင် ၁၉ နှစ်ကြာ ရပ်တည်ခဲ့ပြီးနောက် အသက်အရွယ်အရ၊ ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းအရ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကစားသမားအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ရန် အခက်အခဲများ ရှိလာခဲ့ပြီးနောက် လက်ရှိကစားနေသည့် ဘန်လေအသင်းနှင့် နှစ်ဦးသဘောတူညီမှု ရယူကာ ကစားသမားဘဝမှ အနားယူတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု ကြေညာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
Read more... StartPrev1234...678910Page 1 of 281	Latest Articles	နန်းဆု စိတ်ထဲမှာ လောလော ဆယ် အချစ်ဇာတ်ကားတွေ သီးသန့် ရိုက်ချင်နေပါတယ်။ သွေးအေးအေး နဲ့သွားတဲ့ဆိုက်ကို ကာရိုက်တာမျိုးကို ရိုက်ကူးချင်နေတယ်။